Ukuthengiswa akuthethi ukuba umthengi angazalisa ubugcisa
Nanku umbuzo okhohlakeleyo: Ngubani ophethe i-copyright kwisiqwenga sobugcisa xa uthengisa? Ingumbuzo wamagcisa amaninzi kunye nabathengi abambalwa bokuthenga kwaye kubalulekile ukuba uyayiqonda impendulo.
I-Copyright kunye neMisebenzi Yenqobo yoBugcisa
Xa uthenge umzobo wokuqala, uthenge into ebonakalayo ukuze ufumane kwaye ujabulele. Kwiimeko ezininzi, unomsebenzi kuphela, kungekhona lobunikazi.
Ilungelo lobunikazi lihlala kunye nomculi ngaphandle kokuba:
Zayisayina ngokuthe ngqo kwi-copyright yazo kumthengi.
Yenziwe njengomsebenzi wokuqesha.
I- copyright iphelile .
Ngaphandle kokuba enye yezo meko isebenza, abathengi abazenzi ngokuzenzekelayo ilungelo lokuvelisa umzobo njengamakhadi, iimpapasho, ii-posters, kwi-t-shirts, njll, xa bethenga umzobo. Kuyafana nokuthengwa kwencwadi, ifilimu, umculo, i-vase, iphepiti, itafile, njl.: Ufumana ilungelo lokuzikhethela kwaye unandipha into kodwa ungenalo ilungelo lokulivelisa .
Iingcali zoNxibelelwano zingaCacisa njani i-Copyright
Njengomculi, inokumangalisa ukuba kutheni nabani na oya kucinga ukuba banokukopisha ubugcisa bakho ngenxa yokuba bathenge i-original okanye iphephancwadi. Nangona kunjalo, abanye abathengi banokufumana ingcamango entloko ukuba oku kulungile.
Uhlobo lokuthoba ngendlela ngoba kuthetha ukuba bayonwabela isiqwenga sakho kangangokuba bafuna ukwabelana nabo. Nangona kunjalo, akufanelekanga ngokwemigaqo yokuba loo nto umculi wayenayo kwaye ayikho mthethweni.
Nangona bengabathengisi iimveliso, ukuzaliswa ngokwalo akukulungele.
Yintoni esinokuyenza njengabaculi ukwenza oku kucace kubathengi? Yongeza isaziso se-copyright kwimva yecala (Igama Lonyaka Wegama) kwaye ufake inkcazelo kwisiqinisekiso sakho sobuqiniso okanye ukuthengiswa. Ukuba uthetha kumthengi ngokwakho, jonga ukuba ungayifakela kwingxoxo.
Yintoni uMsebenzi wokuHlaba?
Nayi inxalenye edibanisa abaculi abaninzi. 'Ukusebenzela ukuqesha' phantsi komthetho wase-US kuthetha ukuba udale umzobo njengomqeshwa wekampani ngoko umsebenzi ngokwenene ungowenkampani kwaye kungekhona wena (ngaphandle kokuba isivumelwano sichaza ngenye indlela).
Kubaculi be-freelance, i-copyright ihlala kunye nomculi. Oku ngaphandle kokuba usayine phezu kwe-copyright ngenxa yomsebenzi kumntu okanye kwinkampani eyithumele yona. Le meko iya kuza ngokuphindaphindiweyo xa uvelisa ubugcisa bokuqala boshishino kunye namashishini kwaye ngokungaqhelekanga uya kuba nomthengi wezobugcisa wangasese ucinge ngokuyikhupha.
Ukuba iqumrhu liza kukuthengisa ngokuthengisa i-copyright kwenye yeziqwenga zakho, kufuneka uhlawulelwe. Oku kungenxa yokuba isivumelwano siya kukunqanda ukuba senze imali engaphezulu kwimifanekiso kwixesha elizayo. Ngokomzekelo, awuyi kukwazi ukuvelisa nokuthengisa iimpapasho zeprintshini yesimboli sokuqala ukuba ufuna.
Kukho umahluko phakathi kwelungelo lobunikazi kunye namalungelo okuvelisa. Kwezinye iimeko, unokufuna ukuthengisa inkampani ilungelo, umzekelo, yakha uze uthengise amakhadi okubulisa usebenzisa ubugcisa bakho. Ungabathengisa ukuba ukuvelisa (okanye ukusebenzisa) ngokufanelekileyo, kodwa ugcine ubunikazi bakho.
Oku kukuvumela ukuba uthengise umsebenzi kwezinye iindawo kunye nemikhwa.
Imibuzo engakumbi malunga ne-copyright
Imbango yonke ye-copyright ingaba nzima kakhulu, kodwa bonke abaculi kunye neentengo zobuthengi kufuneka bazi ezi zinto ziseko. Ukuba unemibuzo, qhagamshelana nommeli we-copyright okanye ufunde kwi-FAQ yase-United States ye-Copyright Office.
I-Glossary yezobuGcisa: Iingcingo ezinzima kunye nee-Edge Soft
Ziyiphi Imibala Ehlanganisiweyo?
Isifundo ekuPahleni okanye kwiArt Art